သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် သီပေါမင်း၏ ဆွေတော်မျိုးတော်များအမှတ်တရ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား၏ ကျောက်ဖြူရှိ တိုင်းရင်းသား ကမန်များအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု
Not only Zaw Gyi, Tapathy and Panthays are Kulars but Rakhines also are Kulars! »
Source : The Republic of the Union of Myanmar, President’s blog
The President visited the Royal Residence of the King where the portrait and furniture of the King and traditional appliances were displayed as well and signed in the visitors’ book.
Tags: Burma, Hindustan Times, India, King Thibaw, Myanmar, Ratnagiri, Thein Sein, Thibaw Min
This entry was posted on December 24, 2012 at 6:54 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် သီပေါမင်း၏ ဆွေတော်မျိုးတော်များအမှတ်တရ”
December 24, 2012 at 7:27 am | Reply
Kyaw Htay ဘပြောင်တို့ တော့ ကိုယ်ရန်တော်အမြဲပါတယ်။
တိုင်းပြည်အတွင်းရေးရော အပြင်ရေးရော သူစကားပြန်မှ ဘပြောင်နားလည်တော့ ဘပြောင်ရဲ့ပုရောဟိတ် တရုတ်ကြီး။
တရုတ်က လွှတ်ထားတဲ့ စပိုင်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည် ဂိန်တော့မယ်။
Myo Tint Than ရတနာဂီရိက အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဖက်
Htoon Nooth သီပေါမျိုးဆက် ဘင်္ဂလီများ
Royal Dynasty ဗမာဘုရင်၏ အနွယ်တော် ပြည်ပနေ ဘင်္ဂလီ ကုလားများ နဲ့ တရုတ်နွယ်ဖွားတယောက်တွေ့ကြလေသတည်းပေါ့ ခိခိခိ
December 24, 2012 at 7:28 am | Reply
Faizal Marmat ဘုရားက ကြိုမြင်လို့ အကွက်ဆင်ထားသလား မသိ။ ဘယ်ဥကပေါက်လို့ ဘယ်ဥကို ရောက်နေတာလဲ။ အခုတော့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေပြီပေါ့ …
May You Maung သီပေါဘုရင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဟာဘာကြောင့်ကုလားဖြစ်သွားရတာလဲစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်ဒါလဲအင်္ဂလိပ်တန်ခိုးပါဘဲဗမာဘုရင်ကိုအင်ဒိယခေါ်သွားပြီးသတို့ဘုရင်ဇဖါးရှားကိုမြန်မာပြည်ခေါ်လာတယ်ဇဖါးရှားဘုရင်မှာကပြသနာသိတ်မရှိပေမဲ့ဗမာဘုရင်မှာကသမီျးေတွပါသွားတယ်လေအင်္ဂလိပ်ကမြန်မာပြည်အဆက်သွယ်ဖြတ်ထောက်ပံ့မှုမဖြတ်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘုရင်လဲသေရောကုလာတွေနဲ့ညားတေါ့တာဘဲဒီလိုနဲ့ဗမာဘုရင်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုလက်စတုံးပညာပေးလိုက်တာပါဘဲဒီလိုပါဘဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးကိုလည်းဖေါ်ပြပါအကြောင်းတရားနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်သွားအေါင်ငယ်ရွယ်စဉ်ဘ၀မှာကတည်းကတွန်းပို့လောကထဲရောက်သွားအေါင်အတွင်းကောအပြင်ကပါကြိုတင်စီမံထားပုံရပါတယ်အခုတော့လည်မင်းတို့ ဗမာတွေကုလားနဲ့ကင်းလို့ ရမလားကွပုံစံဖြစ်သွားရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအခလိုခွင်ဝင်အောင်ဖေါ်ထုတ်ပြတာဟာလည်းသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင်မကြည်လိုတဲ့စိတ်တွေကိုဆွဲထုတ်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအါးဖြင့်ဦးနေ၀င်းခေတ်ကအင်ဒိယကရာဂျစ်ဂန်ဒီလာတုန်းကဗာမာဟာသူတို့ကိုမေ့ထားကြောင်းပေါင်းသင်းရောင်းရင်းမဆန်ကြောင်းသွယ်ဝိုက်ပြောတာကိုလည်းငယ်စဉ်ကသိခဲ့ရပါတယ်။